igwe kpụghari ngwaahịa Manufacturers na suppliers - China igwe mkpuchi akwa nke ụlọ ọrụ
Adịchaghị Omuma Preassembled Railing e wuru na-adịgide adịgide! Na UV stabilizers na nnukwu mmetụta na-adịgide adịgide na-emecha, Premium Classic ga-anwale ule nke oge na ụdị nne. Mee ka ndụ gị dị n'èzí ka mma site na iji ngwaahịa ihe eji arụ ọrụ nke ihe eji emepụta ihe!
- Enweghị ọrụ ọzọ mgbe etinyechara otu oge.
- Ezigbo mma ma sie ike dị ka nkume.
- Ọ mara mma ma na ọ nwere ike icho mma ụlọ ndị mmadụ.
- Mfe ịnọgide na-enwe.
Igwe okpu osisi pine a na-enye nsogbu ga-agbakwunye ihe okike na ntanetị gị. Ihe mkpuchi post ndị a na-eji eriri mmado nwere njikọta maka ntinye dị mfe. Ezubere ka ọ daba n’elu nzi ọkwa 4-in x 4-in. Ulo olu bu uzo di nma iji tinye ihe puru iche na ntinye aka na igbe ozi, ngere, ihe iriba ama na ndi ozo!
Gụnyere ihe mgbakwunye etinyegoro tupu etinye ya maka nrụnye dị mfe
Dabara nnochi 4-in x 4-na osisi post
Nrụgide-agwọ ogologo ndụ
Na-agbakwunye ịma mma na nchebe na post gị
Zuru oke maka oche, ngere na ọrụ ndị ọzọ dị n'èzí
Anyị na-akwado ịkwado ihe ndị a na mpụga dị elu iji chebe osisi nke ịma mma ya
Longjie Railing Systems na-ewepụta profaịlụ ntaneti ọkọlọtọ na ụdị jupụtara na ya mana anyị ghọtara na ụfọdụ ọrụ chọrọ ihe zuru oke. Na Longjie anyị na gị na-arụ ọrụ iji chepụta ihe kacha mma maka ọrụ gị. Anyị nwere ikike ịhazi sistemụ igwe anyị ka ọ dabara n'ọhụ ọrụ gị.
1. Enweghi oru ozo mgbe etinyechara otu oge.
2. Ezigbo mma ma sie ike dịka okwute.
3. Ọ mara mma ma ọ nwere ike chọọ ụlọ ndị mmadụ mma.
4. Mfe ịnọgide na-enwe.